> Resource> Utility> Olee otú iji Unformat NTFS Drive
Enwere m ike Weghachi formatted NTFS nkebi?
M nnọọ formatted a nkebi na NTFS faịlụ usoro. M iwọrọke ime ya. Ma ugbu a, m faịlụ na na nkebi nile na-efu, n'ihi na m bụ carelessly na-eme ka a ndabere. M mkpa aka unformat m NTFS nkebi. Ndi onye ọ bụla mara otú ime ya? Daalụ nke ukwuu.
Naa, ọtụtụ draịva na partitions on Windows kọmputa na-NTFS nkebi. Ama ma ọ bụ mmadụ na mberede formatting gị NTFS mbanye ga-ehichapụkwa faịlụ niile na ya. Ma nke bụ eziokwu bụ na ị ka nwere ike unformat NTFS ụgbọala, nke pụtara na ị nwere ike naputa niile furu efu faịlụ azụ na unformatted nkebi. The formatted data ga-efu ruo mgbe ebighị ebi naanị mgbe ọhụrụ data na gị nkebi na-edochi ya. Nke ahụ bụ, ị nwere ike ịkwụsị etinye ọhụrụ data gị formatted NTFS mbanye na anya n'ihi na a formatted NTFS nkebi data mgbake omume na Internet inyere gị aka.
Ga-amasị m ka nwere ike ikwu Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac maka gị. Na nke a na ịba uru-enyere gị aka unformat NTFS mbanye ihe pụrụ iche na ụzọ dị mfe, nakwa dị ka ihe ize ndụ-free ngwọta. Fọrọ nke nta niile formatted faịlụ, dị ka photos, ọdịyo faịlụ, akwụkwọ faịlụ, videos, wdg, nwere ike mfe weghachiri eweghachi si gị NTFS nkebi na ya.
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery iji weghachi formatted NTFS ụgbọala ugbu a.
Unformat NTFS mbanye ke 3 Nzọụkwụ
Ihe mbụ mbụ, biko adịghị wụnye Wondershare Data Recovery na gị formatted NTFS nkebi.
Nzọụkwụ 1 Họrọ "nkebi Iweghachite" mode iji weghachi formatted NTFS nkebi
Mgbe launching Wondershare Data Recovery omume na kọmputa gị, ị ga-esi 3 mgbake ụdịdị na omume window.
Ebe a, ka unformat NTFS nkebi, ka họrọ "nkebi Iweghachite" mode na-amalite na.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị formatted NTFS nkebi
Ugbu a nke usoro ihe omume ga-egosipụta niile ahụ draịva na kọmputa gị. Biko họrọ onye ị chọrọ iji weghachi formatted NTFS nkebi si na pịa "Ekem" ịnọgide.
Ebe a mkpa ka ị họrọ gị formatted NTFS nkebi na pịa "Malite" na-amalite ịgụ isiokwu.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-aga unformat a NTFS mpụga ike mbanye, biko jide n'aka na ọ ga-ghọtara site na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3 Unformat NTFS mbanye
Mgbe iṅomi okokụre, niile recoverable faịlụ gị formatted NTFS nkebi ga-egosipụta. Ị dị nnọọ mkpa akara faịlụ ị na-aga unformat na pịa "Naghachi" zọpụta ha azụ gị na kọmputa.
Cheta na: Biko adịghị na-faịlụ gị formatted NTFS nkebi iji zere ime ka data overwritten.
Top Atụmatụ na otú Ọkpụkpọ gị Disk
Olee otú Idozi Blackra1n Asl.dll Error Ozugbo